September 2017 – Page2– Trend.com.mm
တိတ်ဆိတ်စွာစားသောက်ခြင်းက အစားများများစားချင်စိတ်ကို လျော့ချပေးနိုင်
Posted on September 27, 2017 by Wint
ကိုယ်ဘယ်အချိန်တွေမှာ အစားတွေအများကြီးစားချင်စိတ်ဖြစ်လဲ ဆိုတာ ခန့်မှန်းမိရဲ့လား? တိတ်ဆိတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စားသောက်ခြင်းက သင့်ကိုအစားအများကြီး စားချင်စိတ်တွေလျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ Brigham Young » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in LifestyleLeaveaComment on တိတ်ဆိတ်စွာစားသောက်ခြင်းက အစားများများစားချင်စိတ်ကို လျော့ချပေးနိုင်
စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန်ဖြစ်စေ၊၀မ်းနည်းအားငယ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်စေ သီချင်းလေးဖွင့်ပြီးနားထောင်လိုက်ရင် စိတ်ထဲမှာလန်းဆန်းတက်ကြွသွားတာကိုခံစားမိမှာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့်တစ်နေ့တာလုံးလန်းဆန်းတက်ကြွနေချင်ရင် မနက်စောစောသီချင်းလေးဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာလည်းကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးတွေနားထောင်ပေးရင် စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျပြီး ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကိုအကောင်းဆုံးဖြေဖျောက်ပေးနိုင်တဲ့အရာဟာ သီချင်းနားထောင်တာဖြစ်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on သီချင်းနားထောင်တာဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့လေ့လာတွေ့ရှိ
နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရဲ့နောက်ကွယ်က သင်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသေးတဲ့ ဟာသအလွဲလေးများ
ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တဲ့အခါ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ အံ့သြစရာပြကွက်တွေ၊ ကြည့်ကောင်းအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ မှော်ဆန်ဆန်အရာတွေကိုပဲ မြင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့ ဘဝမှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Hollywood, MoviesLeaveaComment on နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရဲ့နောက်ကွယ်က သင်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသေးတဲ့ ဟာသအလွဲလေးများ
New York မြို့ကိုရောက်ရင် မဖြစ်မနေလည်ရမယ့်နေရာ ၆မျိုး
New York မှာ လူမျိုးစုံကိုတွေ့ရှိနိုင်ပြီးလည်ပတ်စရာနေရာတွေကလည်းအများကြီးပါ။ ခရီးသွားအများစုကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နေရာကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီ New Yorkကိုရောက်ရင် လုပ်ရမယ့်စာရင်းတွေကိုခုပဲမှတ်ထားလိုက်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ၁။Central Park » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, TravelLeaveaComment on New York မြို့ကိုရောက်ရင် မဖြစ်မနေလည်ရမယ့်နေရာ ၆မျိုး
Posted on September 26, 2017 by Wint
ခါးတစ်ဝှိက်မှာအဆီတွေရှိတာ စိတ်ညစ်စရာပါ။ ခါးနားတင်မဟုတ် ၊ ဗိုက်တို့ ပေါင်တို့ အစရှိသဖြင့် အဆီတွေစုဝေးလွယ်တဲ့နေရာလေးတွေကို နှိပ်နယ်ပေးရုံနဲ့ အဆီတွေလျော့ချစေမယ့် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on တစ်နေ့ကို ငါးမိနစ်အချိန်ပေးရုံနဲ့ခါးတစ်ဝှိက်ကအဆီတွေကျစေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက်
သင်ခရီးသွားနေတဲ့အချိန် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ပုံမပေါက်ပဲလန်းဆန်းတက်ကြွနေပြီး သဘာဝအတိုင်းလှပနေစေမယ့် မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်မျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်လေးတွေကိုသတိရလိုက်ပါ။ ၁။Mist ရိုးရှင်းပြီးလှပတဲ့မျက်နှာလေးဖြစ်စေဖို့ Mist ကအဓိကလိုအပ်ပါတယ်။ မျက်နှာကိုအစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးပြီးစိုပြည်စေတဲ့အတွက်ခရီးသွားတဲ့အချိန်၊ကားပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊လေယာဉ်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on ခရီးသွားနေတဲ့အချိန် သဘာဝကျကျနဲ့လန်းဆန်းလှပနေစေမယ့်အလှအပနည်းလမ်း ၇မျိုး
Maze Runner: The Death Cure ရုပ်ရှင်ဟာ အမေရိကန် သိပံ္ပကား ဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Hollywood, MoviesLeaveaComment on ၂ဝ၁၈ မှာရုံတင်ပြသတော့မယ့် MAZE RUNNER : The Death Cure
အိုင်းလိုင်နာအခြောက်တွေက ဆိုးရတာလွယ်ကူပေမဲ့ အိုင်းလိုင်နာအရည်ကတော့ ထင်ထားတာထက်ခက်ခဲပါတယ်။မဆိုးတတ်ရင် တော်တော်ကိုအရုပ်ဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မိန်းကလေးအများစုက အိုင်းလိုင်နာအခြောက်ကိုပဲ ဆိုးကြပါတယ်။အခု အိုင်းလိုင်နာအရည်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ Liquid Eye Liner ဘယ်လိုဆွဲကြမလဲ?
Posted on September 25, 2017 by Wint
ခုခေတ်မှာ ပိန်သွယ်ပြီး ဗိုက်ချပ်အဆီမရှိ ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေဟာ သိပ် ရေပန်းစားလာတယ်။ ဝလာတဲ့လူတွေက များလာတော့ ပိန်ချင်တဲ့ နည်းလမ်းကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Girls' Fashion, LifestyleLeaveaComment on မိန်းကလေးတွေ မှားယွင်းစွာတွဲဖက်ဝတ်ဆင်နေမိတဲ့ ဖက်ရှင်စတိုင်လ် များ
ကေပေါ့ပ်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ BTS အဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ အယ်လ်ဘမ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ “Love Yourself Her” ကို မကြာသေးခင်ကဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခွေထဲက » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in K-Pop, Music, NewsLeaveaComment on Billboard 200 မှာ နံပါတ် ၇ချိတ်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကေပေ့ါပ်အဖွဲ့ “BTS”
ချစ်သူ တစ်ယောက်ရလျှင် သူငယ်ချင်းကောင်း ၁ ယောက် ဆုံးရှုံး…
ချစ်သူကို လက်မလွှတ်ရဖို့ ကြိုးစားနေရတဲ့ သူတွေရဲ့ ဒုက္ခများ
အသားပိုလေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ